Ma ka timid guriga coronavirus? cayaaraha khadka tooska ah ee cayaartooyda ugu badan | Androidsis
Ciyaaraha khadka tooska ah ee ugufiican ee maalmahan lagu qaato guriga coronavirus awgood oo lala ciyaaro asxaabta iyo qoyska
Marnaba ma dooneynayno inaan daabacaad sidan oo kale ah u samayno, laakiin tani waa xaqiiqda. Halkan Madrid waxaan joogi doonaa guriga labada usbuuc ee soo socda cudurka loo yaqaan 'coronavirus', sidaa darteed waxaan ku tusi doonaa ciyaaraha tooska ah ee ugu wanaagsan ee lagula ciyaaro asxaabta iyo qoyska maalmahan loogu talagalay coronavirus oo waxay leeyihiin waqti fiican.
On Android waxaan leenahay noocyo kala duwan oo badan oo ciyaaraha khadka tooska ah ah, sidaa darteed waxaan soo qaadaneynaa tiro wanaagsan oo iyaga ka mid ah iyo dhammaan qeybaha suurtogalka ah, laakiin a Qiyaasta guud: multiplayer khadka tooska ah. Waxaan u sameyn doonnaa si aan dhammaanteen si wanaagsan ugu dhaafno karantiilkan guriga.
5 Xulka Royale
8 Wicitaanka Duty Mobile
9 Maalinta hay
10 Magaalada Harvest
11 Chess Rush
13 Masters Pokemon
14 Waydiisay 2
16 Boqortooyada Qalbiyada Midowga X
17 Madal Madoowga Madoow ah
18 Biliij Mobile 3D
20 Galaxy labaad
21 Nolol Yar
22 Qabow Xeeladaysan
23 Isbedelka xiddigaha
24 Dugsiga Old Runescape
25 Iska xoqid tag
26 Magaalada Salem
Waxaan ka hadalnay kulankaan cusub maalin ka hor multiplayer online kaas oo, sida Apalabrados, waxaan tijaabineynaa maskaxdeena maskaxeed iyo sida ugu wanaagsan waxaa nala siiyaa xisaab iyo waraaqo. Si loo muujiyo is dhexgalka sifiican loo qabtay, hal ciyaartoy oo kaladuwan iyo qaabab badan oo ciyaartoy ah si ay awood ugu yeeshaan inay isla waqtiga la ciyaaraan asxaab iyo qoysas dhowr ah.
kaliya khadadkaas kore waxaan idiinka tegayaa muuqaal lammaanahaygu abuuray Francisoc Ruiz taas oo uu ku sharaxayo sida ay ciyaartu u shaqeyso sidoo kale wuxuu kula talinayaa inaad soo dejiso oo aad rakibto, ha moogaan
Maskaxda - Jaantusyada iyo Waraaqaha
Developer: Juanma Altamirano sawir-haye
Terraria maahan ciyaar bilaash ah, laakiin haddii aan raadino mid aan la ciyaarno aabbaha ama saaxiibkeen inta lagu jiro labadan toddobaad ama ka badan ee ina sugaya, oo ay tahay inaan ku baranno sameyso farshaxanno, wax dhis ama ku sii soco baraha miinooyinka, Terraria waa cajiib. Waa mid ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan ee sandbox ee aan haysano waxayna leedahay ciyaartoy badan oo lagu ciyaaro waqtiga dhabta ah. Taasi waa, inaad la ciyaari doontid asxaabtaada iyo qoyskaaga mid kasta oo leh avatar ama dabeecadooda. 1.3 waxaa lagu cusbooneysiiyay waxyaabo badan oo cusub oo leh is-dhexgal lagu hagaajinayo mobilada.
Developer: Ciyaaraha 505 Srl
Oo sidee ku saabsan qaar Tartanka kart ee saaxiibadaa? Waa hagaag Mario Kart Tour horeyba waxay leedahay ciyaaro waqtiga dhabta ah inaad lashaqeysid asxaabtaada. Waa ee riwaayadaha ugu waaweyn ee ciyaartan ka Nintendo oo awood u yeeshay inuu soo jiito dareenka boqolaal kun oo ciyaartoy adduunka oo dhan ah. Noocyo kaladuwan oo xariiro, jilayaal, habeyn iyo awoodo awood leh oo lagu khiyaaneeyo saaxiibadeena.
Hagaag, waxaan ciyaarnay xisaab, waxaan dhisnay dhufeys aan caadi aheyn, waxaana helnay tartamo qaar, laakiin waxaan kaheleynaa xoogaa adrenalin ah xuquuqdan? Hagaag, PUBG Mobile waa royale dagaalka ugufiican, ama wuxuu yahay kubad sameeyaha khadka tooska ah ee khadka tooska ah oo aad ku wajahdo 99 ciyaartoy isla khariidada, xilligan, iyo taas oo aad awood u yeelan doonto inaad sameysato kooxo saaxiibbo ah ama qoys, ama xitaa shisheeyayaal. Maalmahan waxay u dabaaldegeysaa sanad-guuradii labaad markaa waqtiga ugu fiican ee lagu soo galo bulshada weyn ee Isbaanishka ah.
Developer: XIGTA BETA
Kama tagi karno ciyaaraha degdega ah ee Supercell's Clash Royale iyo inaan ahaano ciyaar toddobaadyadaan dhexdeeda marna arki doonin inaan heysano ciyaartoy, oo ay ugu mahadcelinayaan qarashka ay ku bixiyeen kaarka debit-ka, oo far nagu garaaci kara A ciyaar aan caadi aheyn, inkasta oo ay aad u qiimo badan tahay. Sawir gacmeedyo wanaagsan, cutubyo kaladuwan oo kala duwan iyo awoodda loola ciyaaro saaxiibbada weerarada degdegga ah
Haddii aan ka hadalno ciyaar deg deg ah iyo ciyaar xiiso leh qof kasta oo ka mid ah qoyskeenna, si dhakhso ah ayay maskaxdeenna ugu soo noqotaa Sacab. Ciyaar taas ayaa nala joogay sannado badan, laakiin taasi had iyo jeer waxay noqota kheyraad aad u fiican oo lagu ciyaaro oo ay weheliso mobilada. Waa inaad sameysataa ereyo sida Brainito waxayna abuurtaa khibrad badan oo ciyaartoy badan.
Dabcan, a ciyaarta kaarka oo leh gacanta khabiirka Blizzard oo loogu talagalay ciyaartoy badan oo khadka tooska ah si ay ula dagaallamaan asxaabta iyo suurtagalnimada isdhaafsiga. Si kale haddii loo dhigo, waxaad uga tagi kartaa ciyaarta mobilkaaga si aad uga sii wadato laptop-kaaga. Noocyo badan oo kala duwan oo kanuna waa ciyaar si casri ah loo cusbooneysiiyay sanado. Isticmaal kaararkaaga, fur dadka kale oo kula dagaallama 1V1 ciyaaryahan kale.
Wicitaanka Duty Mobile
Ma ogeyn Call of Duty saga maahan dunidan. Waxaan helnay tan iyo sanadkii la soo dhaafay waxayna leedahay dhammaan tayada aad ka filan karto ciyaarta toogashada khadka tooska ah ee multiplayer multiplayer. Ciyaaraha degdega ah, dagaalka royale iyo dhammaan xikmadda weyn ee multiplayer-ka khadka tooska ah ee Tencent Games, isla kuwaa oo soo saaray nooca mobilada ee PUBG. Waxay leedahay marin royale ah, qaabab kala duwan iyo wax kasta oo aad awoodid ka filo Wicitaanka Waajibaadka.
Wacitaanka Duty®: Mobile - Soo celinta Hadhka
Developer: Waxqabadka Daabacaadda, Inc.
Laga soo bilaabo Supercell waxaan leenahay fardahoodii kale ee guuleystey mana aha cid kale Hay Day. Qabille oo beer ah kaas oo aad awood u yeelan doonto inaad yeelato lo'diina, digaaggaaga, adhigaaga, riyahaaga iyo dhamaan aaladahaas oo lagu sameeyo farmaajo, keegag iyo waxyaabo kaloo badan. Ciyaar u taagan inay ciyaartoydeeda badan si ay awood ugu yeeshaan inay ka mid noqdaan isla magaalada isla markaana ay sidaas uga ganacsadaan ciyaartoyda. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto beerta walaalkaa sidoo kale waxaad ku ciyaari doontaa tartamada faraska iyo waxyaabo kale oo badan. Si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa, sidaas darteed had iyo jeer waxaa jira waxyaabo cusub. Aad u freemium.
Waan jeclaan lahayn dhig dooxada xiddigta, laakiin wali malahan ciyaartoy badan (inkasta oo lagu cusbooneysiiyay a cusbooneysiin weyn dhawaan), sidaas waxaan leenahay beta furan ee Harvest Moon, ciyaar isku eg oo aad saaxiib kula ciyaari karto. Dib-u-celinta Maalinta Hay, maaddaama middan aan lahayn dabeecad aan u dhaqaaqo laakiin halkii aan u dhisi lahayn waxna ku soo saari lahayn, halkan waxaan ku haysannaa avatar aan ku goynta, jarista iyo dhammaan howlahaas lagama maarmaanka u ah beer aad u qurux badan oo farshaxan pixel weyn.
Developer: Ciyaartoyda AVID
Waxaa naloogu dayay inaanu wax weyn dhigno ciyaarta chess sida Chess Royale, laakiin maadaama ay wali kujirto beta oo aysan kajirin waxyaabo badan iyo sidoo kale habkaas oo looga hortago saaxiibkiis, waxaan kugula talineynaa mid kale oo waa weyn: Chess Run by Ciyaaraha Tencent. A chess dagaal dhan kaas oo ay tahay inaad ku ogaato mid kasta oo ka mid ah unugyada si aad ugu raaxaysato kulan oo gaari kara 30 daqiiqo. Waxaan kugula talineynaa inaad waqtigaaga qaadato, maadaama aad ubaahantahay dulqaad si aad ula qabsato. Ciyaar weyn oo leh farsamo iyo tayo muuqaal ah oo aad u wanaagsan; iyo haddii aad jeceshahay ciyaaraha sidan oo kale ah, ha moogaan labadan.
Xaqiiqdii waad wareegtay si aad u aragto haddii aan nahay Waan ilaaway inaan dhigo Forntite, ama xitaa isweydiiya naftaada aaway Fortnite liiskaan? Ma hilmaami karno mid ka mid ah ciyaaraha beddelay barxadda dugsigaas, fagaaraha xaafaddaas ama beerta nasashada ee jaamacadda oo leh khariidad horeba loo yaqaanay. A dagaal royale oo leh muuqaal qurux badan taasna waxaa ciyaara malaayiin. Waxay ku habboon tahay da 'kasta oo aan ku haysanno Android, in kastoo laga soo qaatay Epic Store.
Waxaa naga maqnaa ciyaar Pokémon ah iyo dagaal salka ku haya. Tani waxay noqon doontaa Pokémon Masters halkaas oo aan ku raaxeysan karno ciyaaro badan oo lala yeesho asxaab ama ina adeerkiis oo aan ku leenahay gobol ka tirsan dalkeenna. 3v3 dagaalo isdaba joog ah taas oo aad u baahan doontid inaad ku horumariso Pokémon-ka ka dibna aad u qaado dagaalka. Dhamaan sixirkan weyn taas oo awood u leh inay soo jiidato indhaha malaayiin ciyaartoy oo adduunka ah.
Sida Apalabrados, waxay ka timaaddaa isla istuudiyaha ciyaarta iyo markan wuxuu ina gelinayaa 'Dabagalka Fudud ee Fudud' taas oo aan ku heli doono kumanaan su'aalood oo aan ka jawaabno. Waxay leedahay xaruntaas ciyaartoy badan ku leh maqaalkan oo leh cayaaraha ugu wanaagsan ee khadka tooska ah runti waad qaniini kartaa maalmahaan markaan waqti badan ku qaadaneyno fadhiga inta aan ka gudubno coronavirus.
Ciyaar kale oo badan oo khadka tooska ah oo badan oo khadka tooska ah oo aan seegi karin liiskan. Waad ka ciyaari kartaa qaabka hal abuurka si aad u abuurto wax kasta oo maskaxdaada ku soo dhaca adigoo isticmaalaya xabadaha, ama xitaa ku raaxeysada hab badbaado inaad kula ciyaarto asxaabta kale iyo ka tag macdanta si ay u gooyaan dheeman iyo dhagaxyo qaali ah, ku noqo qalcaddaada si aad u abuurto hub ka wanaagsan oo xitaa u sahamiso badda si aad u hesho waxyaalo yaab leh. Minecraft Pocket Edition waa la cusbooneysiiyay muddo sanado ah waana mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagu raaxeysto ka mid noqoshada maalmahan qaxootiga coronavirus ee guriga jooga.
Boqortooyada Qalbiyada Midowga X
Square Enix sii daayay ciyaar RPG toddobaadyo ka hor badan oo gacha ah oo leh a iskaashato wada shaqeyn badan si loogu raaxeysto waqtiga dhabta ah asxaabta. Maxay tahay in la yiraahdo waxaan lahaan doonnaa adduunyada Disney gacmaheena si aan u helno daqiiqado badda ah oo xiiso leh oo xiiso leh markaan haysanno Donald Duck oo soo bandhigaya awoodo awood leh.
KINGDOM QALBIGA Uχ Wadada Madow
Developer: Hal qayb oo ka mid ah SQUARE ENIX INC
Madal Madoowga Madoow ah
Ma aanan dhigin wax MMORPG ah, waxaana la joogaa waqtigii Mobilada Madow ee aan caadiga ahayn ee isku keenaya kumanaan ciyaartoy ah. Cinwaan aad u soo jiidasho leh muuqaal ahaan oo aad ku awoodi doontid inaad waqtiga dhabta ah kula ciyaarto asxaabta. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan, marka laga reebo inay awood u yeelan karto boqollaal dhiirrigelin ah, waa farshaxankeeda iyo awood u leh inuu xitaa qodo dhulka si uu u beero ka dibna ururi mirahaaga. Si joogto ah loo cusbooneysiiyaa.
Biliij Mobile 3D
MMORPG kale oo weyn oo leh qayb badan oo ciyaartoy badan ah oo aan ku dhex yeelan doonno dhammaan muuqaalka wanaagsan. dagaal ee khayaanada caadiga ah 'n slash. La kulan ciyaartoy kale ciyaar ka buuxan wanaag dhanka muuqaalka ah taasna waa taas anime ku taabo shaneemooyinka cajiibka ah. Dabcan, u diyaar garoow terminal dhexdhexaad ah si aad u hesho dhammaan casiirkeeda.
Kani maahan ciyaar bilaash ah, laakiin waxay ku kacaysaa € 4,49, laakiin beddelkeeda waad awoodaa ku wada ciyaar dhamaan qeybaha qoyska hal mobiil ama kaniini marka aad joogto guriga waqti la qaadashada qoyska. Ciyaar kaamil ah inaad waqtiga dhaafto iyo haddii aadan haysan waddo aad ku hesho jidh ahaan, tan ayaa ah la sii daayay bilooyinkan ka hor waxay leedahay dhammaan sifooyinkaas muuqaal ahaan iyo farsamo ahaanba. Mid kale oo muhiim u ah ciyaarta qoyska.
MONOPOLY-ciyaarta guddiga caadiga ah
Developer: Ciyaaraha Marmalade Game Studio
Ciyaar aan horey loo maqal in kastoo dhaaftay Eve Echoes In kasta oo naxariis leh in kan dambe uusan lahayn beta furan oo ay umuuqato inuu dib udhacayo dhowr bilood sababo la xiriira coronavirus. Sikastaba, Second Galaxy ayaa kugu martiqaadeysa inaad sahamiso a adduunyo ka badan 4.000 galaxies gacanta gacanta saaxiib kula ah meel dhan MMO. Iyadu ma hayso wax ay ka hinaaseyso Eve Echoes, oo haddii aad raadineyso wax qoto dheer, oo ku jira saacado qaado oo ka bax waxyaabaha aan caadiga ahayn, wuxuu abuuraa waayo-aragnimo wanaagsan oo dhanka deegaanka ah.
Si aad ugu noolaato nolol labaad khadka tooska ah Mini Life waa qumman yahay. Taasi ma leedahay taabashada jilitaanka bulshada kaas oo lagu abuurayo avatar-kaaga oo loo naqshadeeyo gurigaaga si loogu qurxiyo alaabta guriga. Waxay u egtahay Sims-ka noloshaada, laakiin mobilkaaga Android. Ciyaar adiga kugu martiqaadeysa inaad waqti la qaadatid saaxiibbadaada gurigaaga dijitaalka ah oo aad awoodi doontid inaad ku wada dukaameysatid. Mid u heellan nooc kale oo waayo-aragnimo ah taasna waxay aad ugu fiicantahay inaad waqti fiican la qaadatid xubin qoyska ka tirsan ama saaxiib guriga ka yimid.
Nolosha Yar: Dunida Avatar-ka Bulshada
Un 5v5 ciyaar online ah oo leh aragti isometric ah oo aad awoodi doontid inaad kudartid saaxiibo si aad ula ciyaarto kuwa kale. Araggaaga isometric oo lagu daray sawiro tayo sare leh waxay u oggolaaneysaa inay soo saarto khibrad weyn oo dagaal xeeladeysan, sida magaceeda ka muuqata. Qariirado si fiican loo qaabeeyey loona daryeelay, iyo xitaa walxo firfircoon sida tareenka oo dhex mara tareenka. Haddii aad tahay qof wax tooganaya, tani way ka badan tahay kaamil ahaan waxaanna u dhigeynaa si taxaddar leh liistadan cayaaraha badan ee khadka tooska ah ee lagu ciyaaro gurigga maalmahan coronavirus.
Tacticool - 5v5 toogte
Iyada oo leh aragtida isometric-ka markale, Supercell wuxuu bilaabay kulankan khadka tooska ah ee internetka ah halka aad rabto awood u yeelan karto inaad iskaashi la yeelatid saaxiib kale si aad uga hor tagto dadka kale ciyaartoy. Cinwaan aad u wanaagsan oo dhammaystiran oo leh waxyaabo badan oo kala duwan. Waa run inay wada tahay freemium, laakiin beddelkeeda waxay kuu oggolaan doontaa inaad ku raaxaysato daqiiqado waaweyn oo ay weheliso moobilkaaga. Ha moogaanin taxanaha khiyaanooyinka inuu si fiican kuu maareeyo
Dugsiga Old Runescape
MMORPG-yada liiskaan ku jira Runescape waa kan ugu fiican shaki la'aan. Ciyaar lagu sii daayay Android sanad kahor kombiyuutarada waxayna leedahay beel raacsan sanado badan. Ciyaar MMO dhab ah oo aad ku raaxeysan doonto xiisaha asxaabta iyo in nooca moobiilku ka adag yahay.
Developer: Ciyaaraha Jagex Studio
Iska xoqid tag
Ayaa yimi maalmahan ka hor sida wadarta cusbooneysiinta ee ereyga guddiga la abuuray 70 sano ka hor. Noocyo kaladuwan oo ballaadhan, isdhexgal weyn, ciyaaro isdaba joog ah oo lala yeesho saaxiibo dhowr ah, awood u lahaanshaha heerka iyo xitaa awooda raadinta xiriirada buuga taleefankeena ee lagu rakibay oo sidaasna kula ciyaaraya caajis iyo madadaalo iyaga la mid ah. Ciyaar freemium ah oo aan u baahnayn inaan ku bixino dinaar euro ah si aan waqti fiican ula qaadanno qoyska iyo asxaabta. Maalmahan aad guriga kujirto maadada loo yaqaan 'coronavirus' waa mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah sida ay ugu tahay qoyska oo dhan.
Developer: Si Xun
Aynu dhammaystirno liistadan ugu wanaagsan ee ciyaartoy badan oo khadka tooska ah lagu ciyaaro oo lala ciyaaro asxaabta maalmahan ka soo noqoshada coronavirus ee Magaalada Salem Waa ciyaar gaar ah tan iyo markii aad wajihi doonto ciyaartoy kale oo noocaas ah "Cluedo". Waxaan ula jeedaa, dilka, beenta iyo tuhunku waa udub dhexaadka ciyaarta taas oo aan ku heli doonno ciyaartoy kale oo mid walba uu weyddiinayo. Ciyaar khiyaano ah oo aad u baahan tahay inaad been ka sheegto oo aad soo ogaato cadawga mas'uul ka noqon doona dilka qof habeen kasta. Ciyaar aan nooceeda kale aheyn oo ha moogaan casharkaan waxaan ka sameynay.
Magaalada Salem - Coven
Developer: Ciyaaraha BlankMedia
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha khadka tooska ah ee ugufiican ee maalmahan lagu qaato guriga coronavirus awgood oo lala ciyaaro asxaabta iyo qoyska
Mahadsanid! Si qayb ahaan loogu beddelo dhammaadka usbuuca dhammaadka guriga qalabka lagu ciyaaro! qayb ahaan! Salaan adeer!
Barnaamijyada ugufiican ee lagu barto luqadaha maalmahan karantiilku ka jiro oo markaa ka faa'iideysta waqtiga
DALKA wuxuu ka dhigayaa nooca daabacan ee PDF qof walba si bilaash ah inuu ku heli karo